Madaxwaynaha oo soo afjaray booqashadiisa dalka Masar (Sawiro) | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Madaxwaynaha oo soo afjaray booqashadiisa dalka Masar (Sawiro)
Madaxwaynaha oo soo afjaray booqashadiisa dalka Masar (Sawiro)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Faderaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo gaba gabeeyey booqashadii rasmiga ahayd ee uu ku joogay dalka Masar labadii maalmood ee la soo dhaafay.
Madaxweynaha iyo wafdiga la socday oo ay weheliyaan Madaxweyinihii dowladdii ku-meel gaarka ahayd Mudane Cabdi Qaasim Salaad Xasan iyo Danjiraha Soomaaliya u fadhiyo dalka Masar Mudane Cabdi Qani Maxamed Wacays ayaa habeennimadii xalay la kulmay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaas Masar.
Khudbad uu goobta ka jeediyey Madaxweyne Farmaajo waxa uu kaga hadlay caqabadaha hortaagan dowladnimada Soomaaliya iyo dadaallada xiriirka ahaa ay ku bixiyeen madaxdii ka horraysay sidii looga bixi lahaa bur burka ku dhacay qarannimada Soomaaliyeed.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in caqabadaha kale ee wiiqay dowladnimada ay ka mid tahay qabyaaladda, musaq maasuqa iyo caddaalad darrada kuwaas oo dhammaantood sababay niyad jab ku dhaca dhallinyarada oo ku dhaliya in ay ka tahriibaan dalka.
“ Dadkeenna oo gacmaha isqabsada, si wada jir ah u wada shaqeeya, dowlad wanaagna aan la immaano, kuwa magaca diinteenna halleeyey aan la dagaalanno, waxa ay Soomaaliya noqonaysaa dal laga haybaysto, dadka wax maal-gashadayaashana ay kusoo hirtaan.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweyaha Jamhuuriyadda ayaa uga mahadnaqay dowladda iyo shacabka Masar sida diirran ee ay ugu marti galiyeen dalkaas isaga iyo wafdigiisa, waxa uuna sheegay in booqashooyinkaan ay kuu muujinaayaan maqaamka iyo danaha Soomaaliyeed.
Previous articleHindiya: Maxkamadda Sare oo mamnuucday sharciga furiinka Islaamka
Next articleRW Khayre oo Eng: Saadaq Cabdullaahi ugu magacaabay wasiirka howlaha guud